डा. गोविन्द केसिका न छोरा-छोरी छन न श्रीमति, २६ बर्ष सरकारि जागिर गरेर कमाएको सबै पैसाले गरिबको स्वा,स्थ्य उ,पचारमा खर्चिन्छन आएको पेन्सनको केहि रकम पनि गरिब जनताको नि-शुल्क स्वा,स्थ्य उ,पचार सेवामा खर्चिदै सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्ला पछि जुम्ला पुगे। घण्टौ हिडेर दु.खी बि,रामीको उ,पचार गर्न जाँदा पनि कतै गाउपालिकाले रोक्यो कतै बसेको होटल बाट प्र,हरीले माथीको आ-देश भन्दै निकाल्यो जुम्लाको कर्णाली स्वा,स्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान (KAHS) मा MBBS पढाइ सुरु गर स,रकार भन्दै एक बूढो शरीर जसो तसो फेरि अ,नशन बस्न बा,ध्य हुनु भयो।
हामी गरिब दु-खी उ,पचार गर्ने नपाएका जनताले डा. गोबिन्द केसि पाएका छौं। जस्ले हाम्रो बारेमा निरन्तर चि,न्तन गर्नुभएको छ। हाम्रो मा,गमा साथ दिने डा. केसिलाई हामिले साथ नदिए कसले दिन्छ ? मस्टो देवताको थान (मन्दिर) मा स,त्याग्रह गर्दै गरेका डा. लाई अस्ति राति प्र,हरीले अस्पताल पुर्याएको थियो। डा.केसिको स्वा,स्थ्य बि-ग्रदै गएको छ। एउटापनि मेडिकल कलेज नभएको कर्णाली प्रदेशमा KAHS बाट MBBS पढाइ सुरु गर्दा कसलाइ घा,टा हुने हो ? कि कर्णाली प्रदेशमा पढाइ हुन नहुने हो ?
मेरो अनुरोध सबैले बोलौ अझ कर्णालीबासी हामी ठुलो स्वरमा बोलौँ ताकि सुन्नु पर्ने कानले सुनुन नसुने झक्झक्याउँ फेरिपनि मे-डिकल मा,फियाहरु स-ल्बलाउन नपाउन। हामी ढिलो बोल्दा पाएको अवसर पनि गु-म्न सक्छ। चि-कित्सा शिक्षा पाउनु हाम्रो अ-धिकार हो! कर्णालीबासीहरु लगाएत दशैँ भरका जनताको स्वा,स्थ्य र भबिस्यको लागि वल्नो पल्नो छिमेकी मुलुक सगं भिक मागेका छैनौं। हाम्रो आफ्नो अ,धिकार आफ्नो देश भित्र खोजेका हौं। फाइल प्र,धानमन्त्रीको टेबलमा अ,ड्किएको छ भन्ने सुनिन्छ। के पुगेन र रोकियो ? के कारणले रोकियो ? कसले रोक्यो ? कसले रोक्न लगायो? यी साझा प्रश्नको उत्तर अब हामिलाई चाहिन्छ नै KAHS को स्थापना देखि अहिले सम्म नि-रन्तर महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु भएका माननीय मन्त्री ,
Naresh Bhandari ज्यु र Mangal Rawal सरहरुले डा. केसिको स,त्याग्रहमा हौसला दिनुस् अझ मिल्छ भने एकपटक भेट्न जानुस्। जति तपाईहरू देखि आशा गरेका छौँ अरु बाट त्यति धेरै आश गरेका छैनौं। हाम्रो मां.ग पूरा गर्ने केन्द्र स-रकार अझैपनि सं,बेदनसिल देखिएको छैन। डा. केसिको अ,नशन तोडाउन भन्दा होईन मांग सम्बोधन गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ। बर्षौ देखि रा-ज्यले गरेको सौ,तेनी व्य,बहार अलिकति नि कम भएको छैन। आखिर कहिलेसम्म यो व्य,बहार ? ध्या-नाकर्षण होस।🇳🇵लेखिका रमा वलि